सिटिजन्सबैंकद्वारा भि एस निकेतन स्कूलमा ए.टि.एम सञ्चालन
२९ साउन, काठामडौँ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले काठमाडौँको मीनभवनस्थित भि एस निकेतन स्कुलमा एटिएम सेवा सञ्चालन गरेको छ ।
मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा बैंकका कार्यकारी अधिकृत गणेश राज पोखरेल र भि एस निकेतनका उबिन पोखरेलले संयुक्त रुपमा एटिएमको उद्घाटन गरे ।
”योर पार्टनर फोर प्रोग्रेस” भन्ने नारालाई शिरोधार्य गरी २०६४ सालमा स्थापना गरी बैंकिङ सेवा दिँदै आएको बैंकले आर्थिक वर्ष ७५\_७६ मा ७० अर्ब ३५ करोड निक्षेप संकलन तथा ६२ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ ऋण प्रवाह गरी दुई अर्ब ८१ करोड ६४ लाख रूपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको बैंकले बताएको छ ।
बैंकले हाल ८१ वटा शाखा ७८ वटा ए.टि.एम र १०० वटा शाखाहित बैंकिङ एकाइमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
यसका साथैे ग्राहकवर्गलाई विभिन्न किसिमका निक्षेप तथा कर्जा सुविधाहरु अनलाइन सुविधा, रेमिट्यान्स् सेवा, बैंक इन्सुरेन्स, आस्वा, ड्राफ्ट, भिसा ए.टि.एम. कार्ड सेवा, भिसा इन्टरनेसनल डलर कार्ड सेवा , साथै कुनै पनि शाखाबाट रकम झिक्न र राख्न सकिने जस्ता सुविधाहरु उपलब्ध गराउँदै आइरहेको पनि प्रेस विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
लक्ष्मी बैंकको काँकडभिट्टामा शाखा विस्तार
२२ मसिंर, काठमाडौँ । लक्ष्मी बैंकले झापाको काँकडभिट्टामा शाखा विस्तार…
निरन्तर घट्दै सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् कति छ आज प्रतितोला ?
२२ मङ्सिर, काठमाडौँ । । निरन्तर रुपमा घटबढ हुँदै आएको…
मन्त्री पोखरेलद्वारा नबिल विज्ञान तथा प्रविधि पुरस्कार वितरण
युनाईटेड फाईनान्सको एकैसाथ सात शाखा सञ्चालनमा
कति छ त आजको बजारमा विदेशी मुद्राको भाउ ? हेर्नुहोस् पूर्ण विवरण
हेर्नुहोस् यस्तो छ आज (मंसिर २२ गते) को बजारमा तरकारीको मूल्य (पूर्ण विवरणसहित)